China Protale okpomọkụ pịa igwe ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Taile
Combo okpomọkụ pịa igwe
igwe akpo oku
Protale okpomọkụ pịa igwe
Okpomọkụ pịa Machine] Heating plate size is 12 ″ × 10 ″, Nnukwu ibu na-enyere gị aka ime uwe elu maka ndị ezinụlọ gị niile. O doro anya na ị na-eme N'onwe Gị, nyefe okwu na owu, eriri, ígwè na ihe ndị ọzọ, dị mma maka ịnye onyinye .
1. (Nnukwu Igwe Digital Heat pịa Machine) Igwe efere kpo oku bụ 12 "× 10", Nnukwu ibu na-enyere gị aka ịme uwe maka ndị ezinụlọ gị niile. O doro anya na ị na-eme N'onwe Gị, nyefee maka okwu na owu, fiber, metal and so on, adabara maka inye onyinye.
2. [Aka Na-adịghị akwụ ụgwọ] Obere okpomọkụ pịa nwere ike ịhapụ aka gị. Mgbe ịtọsịrị oge kwesịrị ekwesị na ọnọdụ okpomọkụ, ị nwere ike ịhapụ ya naanị ma mee ihe ndị ọzọ mgbe ọ na-arụ ọrụ.
3. [Dual Function - Nyefee & Ndetu] Igwe a na-ekpo ọkụ ọkụ nwere ike iji ya ma igwe igwe ọkụ na igwe mmịcha. Dual ojiji bụ ya aku na uba. azụtakwala igwe igwe dị iche iche ọzọ.
4. (Nchekwa mgbochi-ekpo oke ọkụ usoro) okpukpu atọ nke ihe owuwu na-eguzogide okpomọkụ na-ekpuchi mkpuchi mpụga site na okpomọkụ. Heating components na-arụ ọrụ shutoff maka ikpo oke ọkụ, nke na-egbochi ọrụ gị ịnwụnye ọkụ mgbe a na-eme ya karịa ka a tụrụ anya ya.
5. (Press Technology) Patent High frequency akpaka pịa technology, ọ dịghị mkpa ka pịa aka
6. (USER-FRIENDLY Design) - Onye eji eme ihe eji eme enyi na-enweghị mmịfe na-eme ka usoro obibi akwụkwọ niile dị mma ma dịkwa mma. Nkasi obi dị mma na-arụ ọrụ arụmọrụ.
7. (Ọ B SAR SA SAB SAR SA FLỌ AKA NA-AH for) - A na-ahapụta ebe nchekwa dị mma maka nchekwa na itinye ya; Anti-amị amị amị nke adaba ọrụ.
8. (Adabara Sublimation Akwụkwọ & Kwes Nyefee ihennyapade) The Mini okpomọkụ pịa igwe bụghị naanị ike ịnyefe maka thermal nyefe ihennyapade, nwekwara ike ibipụta sublimation akwụkwọ. Ọnọdụ Temp: 0-392 ° F (0-200 ℃); Oge: 0 ~ 999s. Ọ kaara gị mma ịtọ 60s w / 356 ° F mgbe ị na-eji akwụkwọ ntanetị iji bipụta, wee tọọ 10s w / 320 Celsius F mgbe ị na-eji akara mmịnye Ntinye ahụ.
9.AFTER SALES Service: Afọ ojuju guarantee.If maka ihe ọ bụla ị na-adịghị afọ ojuju, biko mee ka anyị mara na ndị ahịa anyị ọrụ ga-eme ike anyị niile iji nyere gị aka.
(Ihe ngwugwu gunyere) igwe igwe oku × 1, Okpomoku na-eguzogide ọgwụ × 2, Isi Nchedo × 1, T shirt × 1, Ntuziaka × 1 ， screwdriver x 1 ， Screws x1pack.
2. Ike: 1000
3.Okpomọkụ Nso: 0 ~ 430
4.Oge Oge: 0 ~ 999sec
5. Mbukota Size: 37 32 * 22cm
Nke gara aga: pen okpomọkụ pịa igwe
Osote: T uwe elu okpomọkụ pịa igwe
Dual Okpomọkụ Press Machine
Okpomọkụ Press Machine Portable
Akwụkwọ ntuziaka igwe
Manual Okpomọkụ Press Machine
T uwe elu okpomọkụ pịa igwe
Foto muglọ Mkpọrọ okpomọkụ pịa igwe
okpu okpomọkụ pịa igwe
pen okpomọkụ pịa igwe
4 na 1 okpu ọkụ pịa igwe
Adreesị:MBA. 18 nke Shengda Street, Chengxi Industrial, Yiwu City. Mpaghara Zhejiang, China.